अब अनुगमनस्थलमै मेसिनबाट खानेकुराको गुणस्तर जाँचिने - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / समाचार / अब अनुगमनस्थलमै मेसिनबाट खानेकुराको गुणस्तर जाँचिने
अब अनुगमनस्थलमै मेसिनबाट खानेकुराको गुणस्तर जाँचिने
By Digital Khabar on November 13, 2018
अनुगमनस्थलमै अब खानेकुराको गुणस्तर परीक्षण हुने भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘फुड इन्स्पेक्सन भ्यान’बाट खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न थालेको छ।
यसअघि खाद्य वस्तुको नमुना कार्यालयमै ल्याएर मात्रै परीक्षण गरिँदै आएको थियो। मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थलगतरूपमा परीक्षण गर्न सहज भएको विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्णले जानकारी दिए।
‘यसअघि कर्मचारीले खाद्य वस्तुको.नमुना कार्यालयमा ल्याएर परिक्षण गर्दथे। मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएपछि शंका लागेमा जुनसुकै ठाउँमा पनि तुरुन्तै परीक्षण हुन्छ’ कर्णले भने।
बजारमा बेच्न राखेका खानेकुरा स्थलगत रूपमा नै परीक्षण गर्न सकिन्छ। खाना, खाजा, मिठाई, दूध, पानी तथा प्याकिङ गरिएका खाद्यान्नको गुणस्तर मेसिनबाट तुरुन्तै थाहा हुनेछ।
यसअघि अनुगमन गर्दा सुँघेर वा चाखेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता समेत रहँदै आएको थियो। खाद्य वस्तु परीक्षण गर्दा मेसिनले निकालेको परिणामलाई आफूले कार्यालयमा प्रमाणित गर्ने गरेको कर्ण बताउँछन्।
‘सुरुआतको समय भए%@     X    4े मेसिन ठीक छ वा छैन भनेर हामीले कार्यालयमा पनि परीक्षण गर्ने गरेका छौँ’ कर्णले भने, ‘प्रतिक्रिया राम्रो दिइरहेको छ, अब यसलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गछौँ।’
कर्णका अनुसार अहिले विभागसँग चार वटा मोबाइल फुड इन्स्पेक्सन भ्यान छन्। तिमध्ये एउटा काठमाडौँका लागि खाद्य वस्तु परीक्षण गर्न सञ्चालन गरिने छ।
एउटा पूर्वतिर संचालन गर्नेगरी बिराटनगर कार्यालयमा, अरु दुई भैरहवा र धनगढी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको कर्णले बताए। काठमाडौंमा मात्रै नभई देशभर खाद्यान्न परीक्षण गर्नेगरी तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
‘यसले राम्रो प्रतिक्रिया दिएर सुधारको अवस्था राम्रो देखियो भने प्रदेशगत रुपमा संचालन हुनेगरी आगामी दिनमा थप्दै जान्छौँ’ उनले भने।
के के परीक्षण गर्न सकिन्छ ?
उक्त मोबाइल फुड इन्स्पेक्सन भ्यानमा २५ वटा आधारभुत मेसिन जडान गरिएको छ। मेसिनबाट जुनसुकै खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तरको अवस्था, मिसावटको अवस्था, माइक्रोबायोलाजीको परिक्षण गर्न सकिने विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उक्त मेसिनबाट पानीको पिएच, आइरन, एमोनिया, सोडा आदिको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ। उनका अनुसार तेलमा रहेका रिफ्याक्टिङ लेस, दुधमा रहेको मेलामाइन पत्ता लगाउन सकिछ।
मेसिनबाट लेवल हेर्न सकिन्छ। क्वीक टेस्ट मेसिनबाट तुरून्तै रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। तर माइक्रोबायोलाजीको परिक्षण (टेस्ट) गर्न कम्तिमा पनि २४ घण्टा लाग्छ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको खाना परीक्षण हुने !
बजारमा प्लास्टिकको चामल http://bit.ly/2t3DHRf
आँपमा कार्बाइडको अत्यधिक प्रयोग गरी बिक्री
← Previous Story कपाल प्रत्यारोपण र यसको साइड इफेक्ट
Next Story → सूर्यदेवको आराधना गरी मनाइँदै छठ